အကောင်းဆုံး PQQ အမှုန့် (72909-34-3) - ထုတ်လုပ်သူ & စက်ရုံ
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Pyrroloquinoline Quinone အက်စစ်အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှု ၂၈၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
Pyrroloquinoline Quinone အက်ဆစ်အမှုန့် (72909-34-3) ဗီဒီယို
Pyrroloquinoline Quinone အက်ဆစ် Specifications
အမည်: Pyrroloquinoline Quinone အက်ဆစ်အမှုန့်
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 330.208 g / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဓာတုအမည်: 4,5-dioxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
နာမ်: Coenzyme PQQ
InChI Key ကို: MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N
ဘဝတစ်ဝက်: 3-5 နာရီ
လျှောက်လွှာ: PQQ သည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ရှင်သန်မှုအကျိုးကျေးဇူးများ (ဥပမာ - မွေးကင်းစကလေးများ၏ကြီးထွားမှု၊ မျိုးပွားစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ Hepatic နှင့် muscular functions များ၊ mitochondriogenesis) နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ကာကွယ်မှုနှင့်တိုးတက်သောသိမြင်မှု၊
Pyrroloquinoline Quinone အက်ဆစ်မှုန့် (72909-34-3) ကဘာလဲ?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) အမှုန့်၊ ဘီ - ဗီတာမင်မိသားစုနှင့်ဆက်စပ်သောဗီတာမင်ဓာတ်ကဲ့သို့သောအာဟာရဓာတ်၏ coenzyme တစ်မျိုးဖြစ်သော methoxatin, BioPQQ စသည်ဖြင့်လူကြိုက်များသောအမည်များရှိသည်။ အပင်များမှအစားအစာများ၊ သစ်သီးဝလံများ၊ အစိမ်းရောင်ပဲပုပ်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ မုဒိမ်းမှုပန်းပွင့်များ၊ စိမ်းလန်းသောငရုတ်ကောင်း၊ ကီဝီသီးစသည်တို့စသည်တို့မှအချဉ်ဖောက်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားသောပမာဏကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Pyrroloquinoline Quinone အက်ဆစ် (72909-34-3) အကျိုးကျေးဇူးများ
PQQ သည်ကိုယ်ခန္ဓာရှိဆဲလ်များကို oxidative ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် antioxidant နှင့် B ဗီတာမင်ကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုအသစ်ရှိသော cofactor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် mitochondrial ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတိုက်ဖျက်ခြင်းနှင့်အာရုံခံဆဲလ်များကို oxidative ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကအကျိုးခံစားခွင့်သုံးခုအပြင် PQQ သည်အခြားလူသိနည်းသောအကျိုးခံစားခွင့်များကိုလည်းပေးသည်။ PQQ သည်အာရုံကြောကြီးထွားမှုနှင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည့်အာရုံကြောကြီးထွားမှုအကြောင်းအချက် (NGF) ကိုပေါင်းစပ်စေနိုင်သည်။ PQQ သည်ကလေးမွေးဖွားမှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သော်လည်းအပြီးသတ်ရလဒ်များကိုရရှိရန်လေ့လာမှုများပိုမိုလိုအပ်နေသေးသည်။ သုတေသနပိုမိုပြုလုပ်သောကြောင့် PQQ ကိုအသုံးပြုခြင်းမှနောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Pyrroloquinoline Quinone အက်ဆစ် (72909-34-3) လှုပ်ရှားမှုယန္တရား?
Pirroloquinoline quinone သည်ကျန်းမာစွာ mitochondrial ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းသုတေသနကပြသခဲ့သည်
ဆဲလ်ကြီးထွားမှု၊ ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်ရှင်သန်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောဆဲလ်အချက်ပြလမ်းကြောင်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်
ရှိပြီးသား mitochondria ကိုပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်သည်
Pyrroloquinoline quinone ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာဆယ်လူလာပရိုတင်းများပါဝင်သောမတူညီသောယန္တရားများမှဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာ PQQ သည် NR1C3 ဟုခေါ်သောဆဲလ်များ၏နျူကလိယတွင်ရှိသော receptor တစ်ခုကိုသက်ဝင်စေသည်။ ဤအဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုသည်ဆဲလ်ကြီးထွားမှုနှင့် mitochondrial အသက်ရှူခြင်းအပါအဝင်အထွေထွေစည်းရုံးခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
CILTEP stack ၏လုပ်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ပင် Pyrroloquinoline quinone အမှုန့်သည် CREB အချက်ပြပရိုတိန်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ၎င်းသည် mitochondria အသစ်၏ကြီးထွားမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဦး နှောက်၏ဆက်စပ်မှုတွင်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအသစ်ဖြစ်ပေါ်ရန်အားပေးသည်။ ထို့အပြင် Pyrroloquinoline quinone အမှုန့်သည်အောက်ဆီဂျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်ဖိစီးမှုမှကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်အချက်ပြမော်လီကျူးများစွာနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ပမာဏများစွာ အသုံးပြု၍ ရလဒ်အနေဖြင့်လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်များထုတ်လုပ်သော ဦး နှောက်ဆဲလ်များအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။
Pyrroloquinoline Quinone အက်ဆစ် (72909-34-3) လြှောကျလှာ
methoxatin ဟုလည်းခေါ်သော Pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည် redox cofactor ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမြေဆီလွှာနှင့် kiwifruit ကဲ့သို့သောလူ့ရင်သားနို့များတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ Pyrroloquinoline quinone အမှုန့်များပါဝင်သောအင်ဇိုင်းများကို quinoproteins ဟုခေါ်သည်။ ဂလူးကို့စ် dehydrogenase သည် quinoproteins များထဲမှတစ်ခုကိုဂလူးကို့စ်အာရုံခံကိရိယာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Pyrroloquinoline quinone အမှုန့်သည်ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုကြီးထွားစေသည်။
Pyrroloquinoline quinone သည်ချက်ချင်းမှတ်ဥာဏ်သာမကအခြားသော Spatial အသိအမြင်ကဲ့သို့သောပိုမိုမြင့်မားသော ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ပစ္စည်းကို CoQ10 နှင့်အတူအသုံးပြုသော Pyrroloquinoline quinone အမှုန့်များ၏သက်ရောက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Pyrroloquinoline quinone အမှုန့်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများတွင် mitochondrial ကျန်းမာရေး, ဦး နှောက်ပံ့ပိုးမှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတို့ပါဝင်သည်။
PQQ အမှုန့် ရောင်းမည်(Pyrroloquinoline Quinone အက်ဆစ်အမှုန့်အမြောက်အများကိုအဘယ်မှာဝယ်ယူရမည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် Pyrroloquinoline Quinone အက်ဆစ်အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်တိကျခိုင်မာသော၊ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယိုစီးမှု, Kelsey (12 ဖေဖော်ဝါရီလ 2017) ။ “ သဘာဝ antioxidant သည်အသည်းရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သည်” msn.com ။ 14 ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ရယူရန်။
Ameyama M, Matsushita K, Shinagawa E, Hayashi M, Adachi O (1988) ။ "Pyrroloquinoline quinone: methylotrophs အားဖြင့်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများအတွက်ကြီးထွားမှုဆွ" ။ BioFactors ။ 1 (1): 51-3 ။ PMID 2855583 ။
Hauge JG (1964) "ဘက်တီးရီးယား anitratum ၏ဂလူးကို့စ dehydrogenase: ၀ တ္ထုအသစ်တစ်ခုပါသောအင်ဇိုင်း" ။ J ကို Biol Chem ။ 239: 3630-9 ။ PMID 14257587 ။